Diyaaradda British Airways oo dab ka kacay, xilli ay ka duuleysay Garoonka Las Vegas – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Diyaaradda British Airways ayaa si lama filaan ah uu dab uga kacay, xilli ay ka duuleysay garoonka diyaaradaha ee McCarran Airport ee magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka.
Rakaabka diyaarada ayaa si deg deg ah looga soo saaray, markii dabka bilowday, waxaana markaas xaalad naxdin iyo cabsi soo wajahay Rakaabkii saarnaa diyaaradan oo nooceedu ahaa Boeing 777 oo ku sii jeeday magaalada London.
Dabkan ayaa ka kacay qeyb ka mid ah matoorka diyaarada, iyadoo durbaba qiic iyo holac uu hareeyay diyaarada, intii ay ku socotay wadada runway-ga ee diyaaradaha ku ordaan.
Ugu yaraan 14 ruux ayaa ku dhaawacmay dabka, kuwaasoo loola cararay goobaha caafimaadka si loogu daweeyo.
Kooxaha gurmadka deg dega iyo baabuurta dab damiska oo deg deg diyaarada ugu gurmaday ayaa ku guuleystay inay baqiyaan dabkii ka kacay diyaarada.
Lama oga waxa sababay dabka ka kacay diyaarada, hase ahaatee waxaa loo maleynaya in cilada tahay mid ka mid ah matoorada oo xilligii ay garoonka ka kaceysay dab ka kacay.